Mpanamboatra sy mpamatsy PICC ambongadiny | LINGZE
Ny CATHTONG ™ II PICC Catheter dia natao ho an'ny fidirana peripheral maharitra na maharitra amin'ny rafi-pitatitra foibe ho an'ny fampidiran-dra, fitsaboana intravena, santionana amin'ny rà, fampidirana herinaratra eo amin'ny haino aman-jery mifanohitra, ny fitantanana ranoka, fanafody ary otrikaina ary ahafahan'ny lalan-drà lehibe fanaraha-maso ny tsindry. Ny CATHTONG ™ II PICC Catheter dia aseho amin'ny fotoana fohy kokoa na mihoatra ny 30 andro.
Ny CATHTONG ™ II Catheter dia noforonina miaraka amin'ny fahaizan'ny Power Injection. Ny Power Injection dia mamela ny fampidirana haino aman-jery mifanohitra amin'ny tahan'ny 5,0 mL / seg. Ity fampiasa ity dia mamela ny tsipika PICC hampiasaina amin'ny Contrast-Enhanced CT (CECT) Imaging.
DIGNE LUMEN DUAL
Ny endrika roa lumen dia mamela ny fampiasana karazana fitsaboana roa miaraka nefa tsy mila mampiditra kateter marobe. Ho fanampin'izay, CATHTONG ™ II dia manasongadina savaivony lumen isan-karazany hanomezana taha isan-karazany.
Famaritana mazava tsara amin'ny clamp sy fantsona fanitarana dia ahafahana mamantatra mora ny tahan'ny fikorianana ambony indrindra sy ny fahaizan'ny tsindrona angovo
Fanamarihana isaky ny 1 cm amin'ny vatan'ny catheter
Ny famolavolana lumen roa dia mamela fitaovana iray ampiasaina amin'ny fitsaboana maro
Ny vatana 55 cm dia azo fehezina araka ny halavany
Hery sy faharetana
Vatan'ny catheter vita amin'ny alàlan'ny polyurethane
Taham-pivoahan'ny hery misintona
Max tahan'ny onja
Lumen Gauge refy
5.0 mL / seg
PICC KIT INDRINDRA
• Fanjaitra fampidirana
• Micro-Access amin'ny Dilatator
Momba ny PICC
Raha mampiasa PICC ianao dia tokony hitandrina mba tsy hampihetsika be loatra ny tananao mandritra ny fampiasana azy mba hisorohana ny catheter tsy hianjera na ho vaky; ho fanampin'izay, kosohy ny fantsona ary ovao ny membrane indray mandeha isan-kerinandro (ataon'ny mpitsabo mpanampy), ary miezaha mampiasa ny fandroana handro. Ny fonosana malemy dia tokony hosoloina ara-potoana mba hisorohana ny katesera tsy ho voasakana na ny aretin-koditry ny lalan-dra sy ny lalan-dra eo amin'ny toerana anaovana ny catheter. Raha voatazona tsara ny PICC, amin'ny ankapobeny dia azo ampiasaina mandritra ny herintaona mahery izay ampy hihazonana hatramin'ny faran'ny fitsaboana simika.
1. Fifidianana lalan-drà
Ny katetika PICC dia matetika apetraka ao amin'ny lalan-drà lafo vidy amin'ny cubital fossa, ny lalan-drà bitika ary ny lalan-drà cephalic. Ny catheter dia ampidirina mivantana ao amin'ny vena cava ambonimbony. Mila misafidy lalan-dra manana fahalemena sy fahitana tsara.
2. Famantarana ny fidiran'ny PICC
(1) Ireo mila fampidirana intravena maharitra, saingy ratsy ny toetran'ny lalan-drà ambonin'ireo ary tsy mora ny manindrona tsara;
(2) Ilaina ny mampiditra fanafody manaitaitra matetika, toy ny fanafody fitsaboana simika;
(3) Fampiasana fanafody maharitra miaraka amin'ny permeability na viscosity avo lenta, toy ny siramamy avo, emulsion matavy, asidra amine, sns.
(4) Ireo mila mampiasa paompy tsindry na tsindry ho fampidirana haingana, toy ny paompy fampidirana;
(5) Famindrana vokatra azo avy amin'ny ra miverimberina, toy ny ra, plasma, platelet sns.
(6) Ireo izay mila fitsapana ra be intravenous isan'andro.
3. Ny fanoherana ny catheterization PICC
(1) Ny toetoetran'ny marary dia tsy mahatanty ny fiasan'ny tsimok'aretina, toy ny sakana amin'ny rafi-pandrefesana amin'ny rà, ary ireo izay voan'ny hery fiarovana dia tokony hampiasa izany am-pitandremana;
(2) Ireo izay fantatra na ahiahiana ho tsy mahazaka ireo singa ao anaty catheter;
(3) Tantaran'ny radiotherapy amin'ny tranokala voamarika taloha;
(4) Tantara taloha momba ny phlebitis sy ny trombosis amin'ny lalan-drà, ny tantaran'ny trauma ary ny tantaran'ny fandidiana vaskola ao amin'ny toerana fampidirana am-bavony;
(5) Ny vatan'ny sela eo amin'ny toerana misy ny fiatraikan'ny katetika.
4. Fomba fiasa
Ny marary dia mandray ny toerana voafintina ary mandrefy ny halavan'ny marary manomboka amin'ny tranokala mankany amin'ny vena cava ambonimbony miaraka amin'ny kasety fandrefesana. Amin'ny ankapobeny 45 ~ 48cm. Aorian'ny fisafidianana ny tranokala puncture dia mifatotra ary mamindra otrikaretina matetika ilay volo. Ny puncture ventrika PICC catheter dia tanterahina araka ny torolàlana, ary mitazona azy io araka ny toetran'ny marary. Ny halavan'ny catheter, horonantsary X-ray aorian'ny puncture, dia azo ampiasaina aorian'ny fanamafisana fa ao anaty vena cava ambonimbony kokoa izy io.
(1) Satria ny teboka puncture dia ao amin'ny lalan'ny ati-doha amin'ny peripheral rehefa ampidirina ny PICC, dia tsy hisy ny komity mandrahona ny ainy toy ny pneumothorax amin'ny rà, ny perforation amin'ny lalan-drà be, ny aretina, ny embolisme amin'ny rivotra sns, ary ny safidin'ny lalan-dra lehibe, ary avo ny tahan'ny fahombiazan'ny puncture. Ny famindrana ny rantsam-batana amin'ny toerana puncture dia tsy voafetra.
(2) Izy io dia afaka mampihena ny fanaintainana ateraky ny marary noho ny lalan-dra miverimberina, ny fomba fandidiana dia tsotra sy mora, ary tsy voafetran'ny fotoana sy ny toerana izany, ary azo ampiasaina mivantana ao amin'ny paroasy.
(3) Ny fitaovana catheter PICC dia vita amin'ny polyurethane manokana, izay manana histocompatibility sy fanarahan-dalàna tsara. Malemy be ilay catheter ary tsy tokony hotapahina. Azo avela ao anaty vatana mandritra ny 6 volana ka hatramin'ny 1 taona. Ny fiankinan'ny marary aorian'ny catheterization dia tsy ho voakasik'izany.
(4) Satria ny catheter dia afaka miditra mivantana amin'ny vena cava ambonimbony, izay be ny fikorianan'ny rà, dia afaka mampihena haingana ny tsindry osmôika na ny fanaintainan'ny tavy eo an-toerana, ny nekrosis ary ny phlebitis vokatry ny zava-mahadomelina fitsaboana simika.
Ireo marary izay mihetsiketsika aloha dia tsy ho tratry ny fahasimbana amin'ny lalan-drà mandritra ny fitsaboana simika, miantoka fa misy lalan-drà tsara mandritra ny fitsaboana simika ary azo tanterahana tsara ny fitsaboana simika. Nanjary fidirana intravenous mety, azo antoka, haingana ary mahomby ho an'ny fanohanana ara-tsakafo maharitra mandritra ny fotoana maharitra sy fanafody ho an'ireo marary mafy fitsaboana ara-simika sy simika simika.
Atsipazo ny fanakanana
Raha voasakana tsy nahy ny fantsom-PICC dia azo ampiasaina ny teknikan'ny tsindry ratsy hampidirana ny urokinase 5000u / ml, 0,5ml ao anaty lumen PICC, mijanona mandritra ny 15-20 minitra ary avy eo misintona miaraka amin'ny syringe. Raha alaina ny rà, dia midika izany fa mahomby ny trombosis. Raha tsy misy ra mivoaka, ny fandidiana etsy ambony dia azo averina averimberina mba hahatonga ny urokinase hijanona ao anaty catheter mandritra ny fotoana iray mandra-pivoahan'ny ra. Marihina fa ny habetsaky ny urokinase dia tsy tokony hihoatra ny 15000u. Aorian'ny tsy fanakanana ny catheter dia esory ny ra 5ml hahazoana antoka fa havoaka ny fanafody sy ny clots rehetra.
Ny akanjo dia tsy maintsy ovaina mandritra ny 24 ora voalohany. Rehefa sitrana tsara ilay ratra ary tsy misy aretina na mandeha rà dia ovao ny fitafiana isaky ny 7 andro. Raha malalaka sy mando ny fitafian'ny ratra dia ovao amin'ny fotoana rehetra izy. Raha misy loko mena, maimaika, exudation, mahazaka aretina ary fepetra tsy ara-dalàna hafa ny tranokala puncture, azo hafohezina ny fotoana fitafiana ary tokony hojerena hatrany ny fanovana eo an-toerana. Ataovy amin'ny fomba hentitra ny aseptika isaky ny miova ny akanjo. Tokony esorina hatrany ambany ka hatrany ambony ilay horonantsary, ary tokony hojerena ny fanamboarana ny catheter mba tsy hianjera. Raketo ny daty aorian'ny fanoloana. Rehefa mandro ny ankizy dia fonosy plastika ilay toerana puncture, ary ovao ny akanjo rehefa avy nandro.
Alohan'ny hampiasana fampidirana PICC dia mampiasa swab landihazo iodophor hamafana ny satroka heparin mandritra ny 30 segondra. Alohan'ny sy aorian'ny fitsaboana intravenous dia ampiasao ny syringe iray tsy latsaky ny 10ml mba hisarihana sira masira ara-dalàna hamoahana ny lumena. Aorian'ny fampidiran-drano ranon-tsiranoka avo lenta toy ny vokatra ra sy ny otrikaina mahavelona dia manosotra ny fantsona miaraka amin'ny 20ml masira ara-dalàna. Raha miadana na mandritra ny fotoana maharitra ny tahan'ny fampidirana dia tokony hososehina saline ara-dalàna ny fantsona mandritra ny fampiasana azy mba tsy ho voasakana ny fantsona.
Teo aloha: Andiana sakafo fisakafoanana
Manaraka: Satroka famonoana otrikaretina